DF Somalia oo ka hadashay tillaabo ay wadaan AU oo lagu dhexdhexaadinayo Somalia & Kenya (Warqad la helay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo ka hadashay tillaabo ay wadaan AU oo lagu dhexdhexaadinayo...
(Muqdisho) 02 Agoosto 2021 – Wasiirka Arrimaha Dibedda ee DF Somalia Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud, ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan aqbali doonin dhexdhexaadin ku saabsan muranka xuduudda badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Warka Wasiirka ayaa jawaab u ahaa kaddib markii la helay xog qoraal ah oo kasoo baxday Midowga Afrika oo ay VOA heshay muujiyey inay door u kala dabqaadis ah ka ciyaari karaan murankan ay Kenya horseedka ka tahay.
Wasiirka ayaa VOA Somali u sheegay in Somalia aanu dookhaasi u furrayn hadda maadaama uu kiisku hor yaallo Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ oo looga fadhiyo inay ka garnaqdo iyadoo dhowr dood afeed maqashay tan iyo 2014-kii.
Wasiirka ayaa dhanka kale sheegay inay doonayaan wanaajinta xiriirka 2da dal ee deriska ah oo ay socdaan tillaabooyin diblomaasiyadeed iyadoo dib loo furay labadii safaaradood ee labada dal.
Previous articleIlhaan Cumar oo u codeeysay sharci Israel lagu siinayo KAALMO aanay shuruudi ku xirnayn oo 3-bil kahor diiddanayd
Next articleDEG DEG: Guddoonka Aqalka Wakiillada Somaliland oo lagu kala baxay